Goorma ayuu qandaraaska u kordhinayaa Paulo Dybala Juventus? | Radio Himilo
Home / Cayaaro / Goorma ayuu qandaraaska u kordhinayaa Paulo Dybala Juventus?
Goorma ayuu qandaraaska u kordhinayaa Paulo Dybala Juventus?
Posted by: Ahmed Haaddi September 19, 2021
Himilo – Paulo Dybala ayaa qarka u saaran inuu qandaraas cusub u saxiixo Juventus isbuuca soo socda
Weeraryahanka Juventus Paulo Dybala ayaa ku dhow inuu qandaraas cusub u saxiixo kooxda ka dhisan Turin.
Heshiiska haatan ee 27 jirka ayaa lagu wadaa inuu dhaco xagaagan, taasoo kicineysa xiriir sii kordhaya oo ah inuu ka tagayo kooxda reer Talyaani, laakiin labada dhinac ayaa hadda la sheegay inay ku heshiiyeen qodobada.
Dybala, oo ka yimid Palermo ka hor xilli ciyaareedkii 2015-16, ayaa shaaca ka qaaday inuu ku dhow yahay inuu kordhiyo joogitaankiisa usbuucii hore,isagoo u sheegay wariyeyaasha: “Waxaan u maleynayaa inuu jiri doono kulan cusub toddobaadkan, agaasimayaasha ayaa isbeddelay, sidaa darteed annagu Waxaan bilownay bilowgii. Waxaan rajeyneynaa inaan gaarno gunaanad farxad leh, waxaan rajeynayaa inay dhowaan jiri doonto war wanaagsan. “
Sida laga soo xigtay Tuttosport, weeraryahanka ayaa haatan qarka u saaran inuu saxiixo heshiiska cusub, iyadoo la filayo in si rasmi ah loogu dhawaaqo kooxda isbuuca soo socda.
Xiddiga reer Argentine ayaa 257 kulan u saftay Bianconeri tan iyo markii uu yimid, isagoo dhaliyay 102 gool isla markaana diiwaangeliyay 42 caawin, waxaana uu bilaabay ololahan cusub isagoo dhaliyay gool kulankii furitaanka Champions League ee ay ka badiyeen Malmo, iyo gool dhalin iyo caawin markii ugu horeysay laba kulan oo Serie A ah.
Previous: Maalinta caalamiga ah ee badbaadada bukaanka
Next: Maqal– Raxiiqul Makhtuum – Casharka 61aad